Ishe vanoparadzanisa vanhu vaimbotenda zvavo magumo akapindirana nekuda kwezvikonzero zvakasiyana.
Dzimwe nguva, imhaka yekuti, seyeredzi dzinopenya dzinovhenekera iro rakasviba denga revamwe hupenyu, ivo vaifanira kushanda sechiedza cheparamu yavo kwenguva pfupi.
Vamwe vanotsauswa kuburikidza nechinangwa cheumwari chakasarudzika.
Ivo vanofanirwa kupesana kwechinguva, kureba kwenguva sekusajeka uye kusingagumi senge chirevo chezwi pacharo, kuitira kuti vazvikure ivo pachavo sekurehwa kwavo, kuti vafambe vachienderera mberi nenzira yavo yekuzvisarudzira, pane chikamu yerwendo iyo yaigona kungotorwa yega.
Vanobva vasangana zvakare, mune ramangwana, mabasa avo vega akapedzwa, vakagadzirira uye vachishuwira kubatana zvakare mukubatana uye nerudo kubatana.
Ini handina zano rekuti redu, ikozvino rangu nerako, ramangwana rakamira sei, asi ndinonamata kuti tisangane zvakare.
Ndatenda nekundiratidza kwandiri kuti zvakanaka zvichiripo mune ino nyonganiso, inoodza moyo isina nyika.
Ndakakuda ipapo, ndinokuda izvozvi, uye ndichagara ndichikuda nguva dzose.
Curtailed Dreams: Fuck The Coronavirus